सावधान ! असुरक्षित यौनसम्पर्कबाट यस्ता रोगहरु लाग्न सक्छन – धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
सावधान ! असुरक्षित यौनसम्पर्कबाट यस्ता रोगहरु लाग्न सक्छन
प्रकाशित मिति: ७ मंसिर २०७१, आईतवार १७:५३
क्लामाइडिया एउटा सामान्य यौन संचारित रोग हो। जुन क्लामाइडिया ट्राइकोमोटिस जीवाणुका कारण उत्पन्न हुन्छ ।यो रोग गुदा वा मुखमैथुनका कारण सर्न सक्छ ।
यो भिसेरिया गानेरिया नामक जीवाणुबाट हुन्छ । जुन महिलाको प्रजनन मार्गको गरम र नमी भएको क्षेत्रमा सजिलै तीब्र गतिमा वृद्धि हुन्छ । यसका जीवाणु मुख, घाँटी, आँखा र गुद्दामा पनि हुर्कन सक्छ ।
यो यौन संचारित बिमारी हो । जुन हर्पिस सिम्प्लेक्स नामक भाइरस (टाइप वन र टाइप टु) बाट जन्मन्छ।
यो ट्रेपोनमा पल्लिडम नामक जीवाणुबाट हुन्छ । यो बिमारीको लक्षण पीडित महिलामा कैया वर्षसम्म देखा नपर्न सक्छ ।
हेपाटाइटिस बीको संक्रमण पनि असुरक्षित यौन सम्बन्धका कारण वीर्यका माध्यमबाट सर्न सक्छ । हेपाटाइटिस बीको सुरुवाती लक्षण थकान, पाचन शक्ति कमजोर हुनु, वाकवाकी लाग्नु आदि हुन्। जुन सामान्य लाग्छन् र यसको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष हो।
एड्स पनि असुरक्षित यौन सम्बन्धका कारण सर्ने रोग हो। यसको लक्षण ज्वारो आउने, थकान, कमजोरी, बारम्बार फंगल संक्रमण, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको कमी आदि हुन्।
कण्डोमको प्रयोग आवश्य गर्नुपर्छ । यो संक्रमण रोक्न धेरै हदसम्म प्रभावकारी हुन्छ ।
–हेपाटाइटिस बी को संक्रमणबाट बच्न समयमै खोप लगाउनुपर्छ । आफ्नो जीवनसाथीप्रति इमान्दार रहनाले कैयन बिमारीबाट बच्न सकिन्छ ।
–कैयौ युवती विज्ञापनबाट प्रभावित भएर गर्भनिरोधक औषधि खान्छन् । त्यस्ता गर्भनिरोधक औषधि लिनुपूर्व चिकित्सकको सल्लाह लिनु आवश्यक हुन्छ । दैनिक खबरबाट
७ मंसिर २०७१, आईतवार १७:५३ मा प्रकाशित